स्वास्थ्य/जीवन शैली Archives - Silichung.com
बिराटनगर । पाठेघरको समस्याबाट पीडित मोरङको रतुवामाई नगरपालिका–९ भौडाहाकी हिरामडी सतार दुई महिना अघिदेखि पीडाले छटपटाई रहेकी थिईन् । उपचार गर्न पैसा थिएन । पैसा नभएकै कारण उपचार नपाएर असह्य पीडामा दिनरात तड्पिन बाध्य थिईन् । ज्याला मजदुरी गरेर दुई छाक टार्दे आएको सतार परिवारले उपचारका लागि पैसाको जोहो गर्न नसक्दा ३६...
डाक्टर तथा पोषण विज्ञहरुको सल्लाह अनुसार मानिसले दिनमा कम्तिमा पनि ८ गिलास वा झण्डै दुइ लिटर पानी पिउनु अनिवार्य हुन्छ । तर दिनभरमा कति पानी पिउने भन्ने कुरा मानिसको सरीरको वजन तथा जिउडालमा भर पर्छ । कत्रो जिउ भएका मानिसले कति पानी पिउने ? यसको सुत्र जानिराखौँः सबैभन्दा पहिलो आफ्नो वजन थाहा पाउनुहोस् । सरीरका ला...
भोजपुरको याकु प्रदेशकै पहिलो पूर्ण संस्थागत प्रसुती वडा
भोजपुर । जिल्लाको पूर्वी अरुण गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित याकुलाई पूर्ण संस्थागत प्रसुती वडा घोषणा गरिएको छ । वार्ड क्षेत्रभित्रका सबै गर्भवती महिलाहरुले स्वास्थ्य संस्थामै आएर सुरक्षित प्रसुती गराएकाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरि वडालाई पूर्ण संस्थागत प्रसुती वडा घोषणा गरिएको हो । साविकको याकु गाविस रहेको यस वडाको स...
नेपाली संस्कृतिमा वियर पिउनुलाई राम्रो मानिदैन । बियरलाई मादक पदार्थका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । बियर पिउनु वा नपिउनु तपाईंको इच्छामा निर्भर हुन्छ । तर, पछील्लो समय वियरको प्रयोग निकै हुने गरेको छ । वियर पिउनु हुन्न भने तपाइलाई वियर खाँदा यति धरै फाइदा छन् भन्दा अनौठो लाग्ला । अमेरिकामा हालै गरिएको एक अध्यनले विय...
एजेन्सी । वयस्क पुरुषले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समय आफूले चाहेको भन्दा छिटो बेला वीर्य स्खलन भएको अनुभव गरेका हुनु सामान्य हो । लिंग योनीमा छिराउनासाथ वा छिराउनुभन्दा पनि अघि नै वा कुनै घर्षण नै गर्न नपाई वीर्य स्खलन हुने समस्या पुरुषहरूमा देखिने यौनसम्बन्धी समस्याहरूमध्ये सबैभन्दा बढी हुने समस्या हो । शीघ्र स्...
मानिसहरुले आफ्नो विशेष साथी खोजिरहेका हुन्छन् । त्यही क्रममा उनीहरु प्रेम सम्बन्धमा पर्ने गर्छन् । धेरैले त्यही सम्बन्धलाई जीवनको अभिन्न अंगको अवस्थामा बदल्ने गर्छन् । अर्थात् विवाह गरेर युगौँयुग सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने वाचामा बाँधिन्छन् । हुन त हर कोहीको जीवनमा कुनै एक समय एक भावनात्मक सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ । तर...
प्राय सबै केटीहरुका लागि अहिलेको मूख्य समस्या भनेको कसरी सुन्दर देखिने भन्ने हो । त्यसमा पनि आफ्नो लुक्स र शरीरलाई कसरी अरुको भन्दा आकर्षक बनाउनेतर्फ नै उनीहरुको बढी ध्यान जान्छ । तर पनि कयौंपटक मोटो शरीर र कपडाभन्दा बाहिर निस्किएको पेटले उनीहरुलाई ठूलो समस्यामा पारिदिन्छ । आफ्नो शरीर फिट बनाउने चाहना त सबैको हु...